Nifidy Filoha Vaovao i Singapore · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2011 8:21 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Aymara, English
Dr Tony Tan dia voafidy ho Filoha fahafito ao Singapore ny 27 volana Aogositra nefa ny elanelan'ny vato nandreseny dia salan'isa 7,269 fotsiny. Nahangona 35.19 isan-jato tamin'ny fitambaran'ny vato fotsiny izy kanefa dia ampy izany handresena ireo Kandida telo hafa tamin'ny fifidiana Filoham-pirenena voalohany tao Singapore tato anatin'ny 18 taona.
Dr Tan dia notohanan'ilay Praiministra Lee Hsien Loong irery ihany . Io Praiministra io dia namoaka ity fanambarana ity taorian'ny famoahana ny valim-pifidianana :
Io tenifototra #sgpresident (Filoha io ) no nibahan-toerana teo amin'ny tontolon'ny twitter tao Singapore. Indreto misy fanehoan-kevitra sy tolo-kevitra ho an'ilay Filoha vaovao :
@patrickpang : Antenaiko fa @dr_tonytan dia hanohy hibitsika … Ka dia izy no ho Filoha voalohany hibitsika.
@inchchua : mahatsiaro ho tsy metimety androany niaraka tamin'ny valin'ny fifidianana #sgpresident. Manaporofo indray mandeha indray fa hoe ny saina no zava-dehibe noho ny fo.
@sgelectorate: re fa : SGreans dia nifidy tany amin'ny ministera hafa ; zavatra iray tena tsara niaraka tamin'ny fanambaran'ny reny (fanambaram-pahaterahana).
@BB_See : Koa dia Singapore, Tsy mihevitra aho fa hilaza izao, nefa, manomboka anio manana 5 taona ianareo hivalozana.
@iamleonwei : Ny fangalaram-bato dia fanitsakitsahana ny demokrasian'ny firenena koa dia mpifidy 37,000 no tsy tokony ho eo.
@mrbrown : Raha mandresy i Tan Cheng Bock , dia resy i PAP. Raha mandresy i Tony Tan , miaraka amin'io salan'isa io , dia mbola resy ihany i PAP . (fanamarihan'ny mpanoratra : PAP no antoko eo amin'ny fitondràna ao Singapore).
Ity ambany ity ny lahatsary avy ao amin'ny youtube nalefan'ny The Online Citizen na (ny mponin'ny Aterineto ) momba an'i Dr Tan nanao ny kabarim- pandreseny.
Ny fisainan'ny mpandraharaha mpananihany no mino fa ilay valim-pifidianana dia maneho ny ‘tsy hafalian’ ireo mpifidy ao Singapore momba ny fitantanana ny Firenena.
AKIKONOMU dia manazava hoe maninona ny toerana maha filoha no tena toeram-boninahitra :